Global Voices teny Malagasy » Hetsika Mandao Fonenana: Mandrisika ireo tanora Angoley hisaraka amin’ny ray aman-dreniny ny fironana vaovao ao amin’ny tambajotra sosialy · Global Voices teny Malagasy » Print
Hetsika Mandao Fonenana: Mandrisika ireo tanora Angoley hisaraka amin'ny ray aman-dreniny ny fironana vaovao ao amin'ny tambajotra sosialy
Voadika ny 04 Oktobra 2018 5:08 GMT 1	 · Mpanoratra Simão Hossi Nandika (en) i Dércio Tsandzana, Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Angola, Fampandrosoana, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Hehy, Hevitra, Mediam-bahoaka, Saripika, Tanora, Toekarena sy Fandraharahàna
Hita eto i Mario Igoor Diias, mponina ao Namibe (Angola), fa mandao ny tranon-dreniny. Sary nahazoana alalana.
Fironana ao amin'ny media sosialy novokarin'ny tanora Angoley mba handrisihana ny tsirairay hahaleo tena ny Hetsika Mandao Fonenana .
Tao anatin'ny volana vitsivitsy lasa izay, tanora an-jatony no namoaka ny sariny mibata entana sy miala ny tranon'ireo ray aman-dreniny, hetsika fifaninanana sy fandresena ho an'ireo izay miasa ho amin'ny fahaleovantenany manokana.
Saingy tsy tena afaka miala ny ankamaroan'izy ireo satria raikitra ao an-trano. Misarika ny saina amin'ny zava-misy ny hetsika fa maro ny tanora Angoley no mijanona ao an-trano noho ny krizy ara-bola maharitra, tsy fisian'ny asa ho an'ny tanora izay tafakatra manodidina ny 56 isanjato  .
Lasa lamaody ny Hetsika Mandao Fonenana taorian'ilay fihaikana sary-sy-soratra malaza antsoina hoe ‘Novonoinao aho ‘ izay nampifoha an'i Angola ahitana tanora nanohitra ny tsy firaharahian'ny governemantany amin'ny fikarakarana ny filàna fototra.
Fiainana tsy azo antoka, fahafahana voafetra
Ny 21 Jolay 2018 , tanora an-jatony no nanao diabe tao an-drenivohitra Luanda nanohitra ny tsy fananan'asa goavana, ary nitaky ny fanatanterahana ny fampanantenana nataon'ny Filoha Angoley João Lourenço tamin'ny famoronana asa miisa 500.000 .
Viriato da Cruz, 28 taona, iray amin'ireo mpikarakara, nilaza fa tsy an'asa izy nandritra ny fito taona .
Araka ny fanadihadiana natao momba ny fiakaran'ny vidim-piainana izay namakafaka ny saran'ny sokajy miisa 200, anisan'izany ny trano sy ny fitaterana, iray amin'ireo tanàndehibe lafo fiainana indrindra manerantany  amin'ny entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny tanàndehiben'i Luanda.
Nanatevin-daharana ny fanentanana ny Hetsika Mandao Fonenana i Fernanda Januário NGuami Maka , mpianatra serasera ao amin'ny Oniversite tsy miankina iray ao Angola, tamin'ny alalan'ny fizarana ny sariny izay mampiseho azy nandao ny tranon'ireo ray aman-dreniny. Ankoatra ny fihomehezana kely, dia mahita ity fironana ity ho endrika fanoherana ny toe-javatra misy ankehitriny ao Angola izy.
Hoy izy nanoratra raha niteny tamin'ny governemanta:
Ity lohahevitra ity izay mety hihomehezan'ny ankamaroan'ny olona dia fomba iray hanaovana hetsi-panoherana manohitra ny toe-javatra iainan'ny vahoaka Angoley ankehitriny. Mbola miaina eo ambany fiahian'ny ray aman-dreniny ny tanora Angoley amin'ny ankapobeny, ka natao izany mba hahatakaran'izy ireo ny tena hevitr'ilay lohahevitra hoe “MANDAO NY FONENAN'NY RAY AMAN-DRENY”.
Roahy ao amin'ny tranon'ny ray aman-dreniko aho, ataonareo izay hahamenatra ny fiainan'ny tanora ratsy kokoa. Roahy ao amin'ny tranon'ny tranon'ny reniko aho.
Roahy eto aho, rehefa mila vato ihany ianareo vao mody manahy ny momba ahy. Roahy ato an-tranon'ny reniko aho, tsy afaka manangana sekoly intsony ianareo, milaza ianareo fa miady amin'ny tsy fahaiza-mamaky teny sy manoratra.
Roahy eto aho, tsy manangana politikan'ny asa ianareo, manararaotra ny fanamiana mba handrahonana sy hangalana vola amin'ny mpamily taksy .
Fernanda Januário NGuami Maka nandray anjara tamin'ny hetsika fanentanana Mandao Fonenana. Sary nahazoana alalana.
Nilaza tamin'ny Global Voices i Tatiana Pinheiro sy Ilda Calandula, mpianatra roa ao amin'ny Oniversite Tsy Miankina any Angola, fa tsy ratsy ho an'ny tanora akory ny miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreniny, raha nitanisa ireo antony ara-kolontsaina izy ireo:
Misy ny olana ara-kolontsaina avy amin'ireo vondrom-poko vitsivitsy izay mety ho anton'ny tsy hamelan'ny fianakaviana maro ny havany handao azy ireo.
Misy lafiny ara-pianakaviana sy ara-kolontsaina momba ny [firafitry ny] tranonay izay honenan'ny fianakaviana iray manontolo ao amin'ny toerana iray amin'ny efitra lehibe kokoa izay zaraina ho trano kely kokoa mba ahafahan'ny tsirairay miaina.
Na izany aza, nanoratra tao amin'ny pejiny Facebook niaraka tamin'ny fahakiviana i Graça Isabella Sebastião  , tovovavy iray hafa izay nanatevin-daharana sy nanohana ilay hetsika :
Ny hetsika mandao ny tranon'ny ray aman-dreny: misy olona ve handray ahy? Amin'izao fotoana izao, ety an-dàlana aho mitomany sady tsy fantatro hoe aiza no halehako.
Miaraka amin'ireo tanora Angoley an'arivony izay maniry ny handao ny akanin'ny ray aman-dreniny, maro ireo nanomboka vondrona Facebook  manana ny anarana hoe Hetsika Mandao Fonenana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/10/04/127104/
 56 isanjato: https://www.dw.com/pt-002/um-retrato-do-desemprego-em-angola/a-44782869
 Novonoinao aho: https://globalvoices.org/2018/03/08/you-just-killed-me-the-internet-meme-defying-angolas-government/
 21 Jolay 2018: http://pt.rfi.fr/angola/20180721-angolanos-marcham-contra-desemprego
 tanàndehibe lafo fiainana indrindra manerantany: https://www.bbc.com/news/business-40346559
 handrahonana sy hangalana vola amin'ny mpamily taksy: http://www.macaubusiness.com/angola-police-arrest-893-people-in-operation-to-make-taxi-ranks-safer-in-luanda/
 vondrona Facebook: https://web.facebook.com/search/str/opera%C3%A7%C3%A3o+sai+da+casa+da+velha/keywords_groups